Oge opupu ihe ubi | Rayson
N'ịdabere na teknụzụ dị elu, ezigbo ike nrụpụta, na ozi zuru oke, Rayson na-ebute ụzọ ugbu a ma na-agbasa rayon anyị n'ụwa niile. Yana ngwaahịa anyị, a na-enyekwa ọrụ anyị ka ọ bụrụ ọkwa kachasị elu. Oge opupu ihe ubi abụọ anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara nwere ọtụtụ ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ha na-enye ndị ahịa ọrụ dị elu karịa ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara akwa oge opupu ihe ubi ọhụrụ ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'anya inyere gị aka n'oge ọ bụla.th ngwaahịa ahụ na-egosi nkasi obi chọrọ. Achicha akwa ya nwere mmetụta dị mma ma na-eme ihe na-eme ka mmiri na-eme ka mmiri ghara ịda.